EMMO/NAT : Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana
Nanatanteraka fivoriana tahaka ny fanao isan-kerinandro indray ny EMMO/NAT, omaly. 25 février 2021
Fivoriana natao indrindra hifampitana ny vaovao izay misy eto Antananarivo sy any amin’ny Faritany ary hanaomezana tondrozotra ho an’ny herinandro manaraka.
Ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena no nitarika ny fivoriana, tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava.
Ventin-kevitra roa no tena nantitranterina nandritra ity fivoriana ity. Voalohany, nitondra ny fisaorana ho an’ny vahoakan’ Antananarivo iray manontolo noho ny faneken’izy ireo ny fandaminana rehetra izay napetraky ny Fitandroana ny filaminana nandritra iny faran’ny herinandro lasa teo iny. Tsy nanaiky notarihina tamin’ny korontana ary tsy nirisika nanaiky hatao fitaovana politika. Nanolotra ny fialan-tsiny ho an’ireo izay voaelingelina tamin’ny fivezivezena noho ny lalana tapaka koa ny mpitandro filaminana.
“Tsy sitrapo avy ato amin’ny Fitandroana ny filaminana tsy akory no hanaovana an’ireny fa tsy maintsy natao mba hahafahantsika niaina am-pilaminana sy hametrahana hatrany ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany”, hoy ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjaka.
Nankasitrahana ihany koa ireo mpitandro filaminana izay niantsehatra teny an-kianja nanomboka ny maraina nandra-pahariva ary naneho fahatoniana sy fahamatorana tamin’ny asa rehetra izay niandraiketana, ka na nisy aza ny atao hoe savorovoro kely dia afaka nifehy izany araka ny tokony ho izy.
Tsy nampiasa hery, tsy nandratra olona. Na eo aza izany, nanentana ny rehetra hatrany ny eo anivon’ny Emmo/Nat ary nilaza fa : “Ny korontana izay efa nisy teto amin’ny tany sy ny Firenena nandritra ny taona maromaro nifandimby dia tsy mbola nitondra soa velively ho an’ity Firenentsika ity”. Malahelo ihany izahay, hoy ny Komandin’ny Zandarimaria raha mahita ny olona izay voasambotra ka voatery nampidirina any am-ponja noho ny fandikan-dalàna izay nataony tamin’ireny zava-nisy tamin’ny 20 Febroary 2021 ireny.
Ilay olona nandrisika azy ireny kosa, milamina tsara any an-tranony any. “Aoka isika tsy ho voarebirebin’ny olona hanao zavatra tsy fanao sao ho sahirana. Aza manaiky hatao fitaovana”, hoy hatrany ny voalaza. Nohamafisina io omaly io koa fa : “vonona hatrany ny mpitandro filaminana ny hifanolo-tanana amin’ny vahoaka amin’ny fampandriana fahalemana hahazoana tany mandroso sy tany milamina”